नहीं।4शरद ऋतु 2017 - इनाम फाउंडेशन
"रातहरू निष्पक्ष रेखाचित्र" छन् किनकि तिनीहरू शरद ऋतुको समयमा यी भागहरूमा भन्छन्। त्यसैले तपाईलाई ध्यान दिईदिने विचारहरू उल्टाउन, यहाँ इनामहरू र समाचारका बारे केही कथाहरू र इभर्ड फाउण्डेसन र गत केही महिनाहरूमा हाम्रा गतिविधिहरू छन्। हामीले पहिले नै हामीले हाम्रो साप्ताहिक समाचार वस्तुहरूमा कथा पढ्न सक्नुहुने सबै कामहरू समावेश गरेको छैन वेबसाइट वा हाम्रो twitter खुवाउन।
जब तपाईं आउनु भयो तपाईलाई प्रसन्न उत्सवको मौसम। तपाईं र सबैलाई शान्ति र प्रेमलाई इनाममा सबैलाई पुरस्कार दिनुहोस।
RCGP इनाम पुरस्कारको लागि मान्यता
गरी विल्सन द्वारा पोर्न मा तपाईंको ब्रेन
"औषधिको एक नयाँ क्षेत्र" - आरसीजीपी एडोन्सनन्स हेल्थ सम्मेलन
TRF अनुसन्धान प्रकाशित
युवा र आपराधिक न्याय नियुक्तिको लागि केन्द्र
सम्बन्ध स्कटल्याण्ड - जोडीहरु को लागि सेक्स चिकित्सक प्रशिक्षण
एडिनबर्ग मेडिको-चिरर्गिकल सोसायटी (1821 स्थापना गरिएको)
यौन स्वास्थ्य को विकास को लागि समाज (SASH)
युवा थिएटर समूह, आश्चर्य मूर्खहरू Cool Cool Effect मा अश्लील पोषण गर्छन्
इनाम रीयल कलेज जनरल प्रिएशननर्सले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावको विषयमा जीपी को लागी जारी व्यावसायिक शिक्षा (सीपीडी) लाई मान्यता प्राप्त गरेको छ। वारंट यूके र आयरल्याण्डको अन्य मेडिकल रयल कलेजहरूको सदस्य हुनुहुन्छ।
हामी यी मुख्य रूपमा एक दिन कार्यशालाको रूपमा डेलिभर गर्नेछौं। प्रत्येक7CPD बिन्दुहरूको लायक हुनेछ। मनोवैज्ञानिकहरू, नर्सहरू र चिकित्सकहरूलाई स्वागत छ। फार्मासिस्टहरू तत्काल आवश्यक पर्चाको लागि अति-द-काउन्टर औषधि खोज्ने पुरुषहरूलाई स्वास्थ्य सल्लाह दिन आवश्यक छ, हामी तिनीहरूसँग पनि सहयोग गर्छौं। योजना जनवरी मा कार्यशालाहरू डेलिभर सुरु गर्न हो। विवरणहरूको लागि हेर्नुहोस्। यदि तपाईं बीचमा कार्यशालाहरूमा बढी जानकारी चाहनुहुन्छ भने, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् mary@rewardfoundation.org.
तपाईंको ब्रेन पोर्नमा गैरी विल्सन द्वारा
यो दोस्रो संस्करण यस उत्कृष्ट र संक्षिप्त पुस्तक को अब उपलब्ध छ।
प्रोफेसर फ्रेडरिक किट्स, ओपन युनिवर्सिटी, लेखक कसरी लैंगिक इच्छा गर्ने काम गर्दछ: आत्मकथा उकालो.
2014 मा, कहिले तपाईंको ब्रेन पोर्नमा पहिलो प्रकाशन, अनलाइन पोर्नोग्राफी र मानव सम्बन्ध ब्रोले सार्वजनिक बहसमा चित्रण गरिएको चित्रणका लागि अन्य प्राविधिक सहायकहरू थिए। तब देखि व्यापक संस्कृति धीरे-धीरे एक स्क्रीनमा घिमिरे वा वीआर हेडसेटमा पल्टिँदै गर्दा साकार हुनु भएको छ यौन मुक्तिको बाटो होइन। सबूतहरूले विपरीत दिशामा संकेत गर्दछ। ग्राफिक यौन सामग्री, मांगमा उपलब्ध छ, र स्पष्ट रूपमा अनन्त विविधतामा, मानव भलाइको लागि महत्त्वपूर्ण खतरा हुन सक्छ। चालीस अध्ययनहरूले अब गरिब संज्ञानात्मक कार्य र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूमा अश्लील प्रयोगलाई लिङ्क गर्दछ। बीस-तीन अध्ययनहरू यौन समस्याहरूमा अश्लील प्रयोग गर्दछ र यौन उत्तेजनाहरूमाथि उचाइ बढाउँछ। यीमध्ये पाँचको कारण कारणले गर्दा अश्लील अश्लील प्रयोगलाई हटाउन पुरुषहरूले निको पार्ने उपायहरू मूल्यांकन गरे।
लोकप्रिय विचारको विपरीत, किशोरहरूले जीपी को सेवाहरू प्राय: अन्य आयु समूहहरूको प्रयोग गर्छन्। हामीले यस सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका जीपीएसले केही निश्चित अवस्थाहरूको सामना गर्दा केही रोगीहरूको सही प्रश्नहरू सोधिरहेका थिएनन्। एक जीपीले अश्लीलको प्रभावको बारेमा खुलासाहरू "दबाइको नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्न वा नयाँ अङ्ग भेट्टाउन" जस्तै थियो "हामी प्रसन्न भए कि प्रस्तुतीकरण राम्रो भयो र उनीहरूको क्लिनिकल अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित थियो। डाक्टरहरूले उनीहरूलाई भविष्यमा ती चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू सोध्न प्रतिबद्ध थिए।
यो किशोर स्वास्थ्य मा स्कटल्याण्ड मा पहिलो सम्मेलन मा भयो। यो 17 नोभेम्बर मा एडिनबर्ग मा लगाइएको थियो र आरसीजीपी द्वारा लन्डन देखि आने किशोरों को विशेषज्ञहरु संग संगठित गरियो। दर्शकहरु मा 40 स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकहरु मा थिए।
फरवरी 2017 मा, टीएमएफले4मा भाग लिनुभयोth इजरायलमा व्यवहारिक लतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन। यस अकादमिक सम्मेलनले इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको विभिन्न प्रभावमा व्यवहारमा धेरै नवीनतम अनुसन्धान प्रस्तुत गर्यो। चिकित्सक समुदाय र पोर्नोग्राफी अनुसन्धान विषयमा यो विषयको महत्त्व दिईयो, हामीले यो समुदायलाई यी समुदायहरूमा उपलब्ध गराउन एक लेख संकलन गरे।
अश्लील लक्षणहरूमा 4th अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पोर्नोग्राफी र यौनसम्पर्क अनुसन्धान पत्रहरू प्रकाशित गरिएको थियो यौन लत र अनिवार्यता 13 सेप्टेम्बर 2017 मा अनलाइन। यो भोल्युम 24, नम्बर 3, 2017 मा प्रिन्टमा देखा पर्नेछ। नि: शुल्क प्रतिलिपिहरू अनुरोधबाट उपलब्ध छन् darryl@rewardfoundation.org.
हाम्रो सीईओ, मरियम शर्प को युवा र आपराधिक न्याय केन्द्र (सीवाईसीजे) को ग्यास्साको स्ट्राथकेडी विश्वविद्यालय मा केन्द्रित गरिएको छ। हामी खुसी छौ। मरियमले भने "मलाई आशा छ कि यो पुरस्कारले फाउन्डेसन फाउण्डेसनको अनुसन्धान र सचेतनाको कामलाई फैलाउन मद्दत गर्नेछ र स्कटल्याण्डमा सार्वजनिक नीतिको विकासमा हाम्रो योगदान बढाउन मद्दत गर्नेछ।" मरियमले सीवाईसीजे कार्यक्रममा ग्यासगावमा7मार्च 2018 मा बोलाइनेछ।: खैरो कक्ष र जेलका कक्षहरू: हानिकारक जवान व्यक्तिहरूको न्यूरोडेलम्यानल र संज्ञानात्मक आवश्यकताहरू भेट्नुहोस्.
त्यहाँ केही दम्पतीहरूले पोर्नोग्राफीको प्रयोग किन थुप्रै कारणहरू छन्। जुनसुकै प्रेरणा, रिटेल स्कटल्याण्डमा यौन चिकित्सकहरूबाट मद्दत खोज्दै छन्। ऐनी चिल्टनको अनुसार, त्यहाँ प्रशिक्षणको प्रमुख, 1990 को पोर्टेगोग्राफी परामर्शको लागि आउनु पर्ने युगलहरु को 10% को वरिपरी एक मुद्दा थियो। आज उनी भन्छिन् कि यो 70% को लागि एक समस्या हो। बाहिरको नियन्त्रण पोर्नोग्राफी को उपयोग को सम्बन्ध मा वृद्धि को एक संख्या मा तलाक र सम्बन्ध टूटने को कारण उद्धृत गरिएको छ। उनले भने, "उनी हरेक यौन पोषणको बारेमा जान्छन् तर ईन्टरनेटको बारेमा केही पनि छैन।"
चिकित्सकहरूलाई नयाँ अश्लील-संतृप्त वातावरणसँग बुझ्न र सम्झौता गर्न मद्दतको लागि, आरएफएफलाई भर्खरै प्रशिक्षित चिकित्सकको भर्ना गर्ने केही प्रशिक्षण दिन निमन्त्रणा गरिएको थियो। यौन चिकित्सकहरू लगभग मनोविज्ञानमा विशेष रूपमा प्रशिक्षित गरिएको छ. आज व्यवहार व्यवहार को लत र तंत्रिका रोग अनुसन्धान को अधीनता यो कुनै सम्बन्ध चिकित्सा प्रशिक्षण को एक आवश्यक भाग हो। यसले उदाहरणको लागि मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ कि कसरी विशेष गरी पुरुषहरू, अनलाइन पोर्नोग्राफीको मुख्य प्रयोगकर्ताहरू छन् जुन पोर्नको नयाँ शैलीमा बढ्न सक्छ र स्तरको उत्तीर्ण गर्न आवश्यक छ कि कुनै साझेदारसँग मेल खाँदैन। यो लत को एक क्लासिक फीचर 'सहिष्णुता' भनिन्छ।
बीउ लगभग तीन वर्ष अघि रोपिएको थियो। त्यस समयमा, हाम्रो सीईओ मेरी शेरपले किशोरको मस्तिष्कमा र यौन अपराधको लिङ्कमा इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको प्रभावबारे आपराधिक न्यायिक पेशेवरहरूको प्रस्तुतीकरण गरेको थियो। दर्शकलाई रयल एडिनबर्ग अस्पताल र SHAAP को संस्थापक (अल्कोहल समस्याहरु मा स्कटिश स्वास्थ्य कार्य) को सेवानिवृत्त सल्लाहकार मनोविद्रोही ब्रूस रितसन थियो। उनी अश्लील अभिभावकहरूको प्रभाव र किशोर मस्तिष्कमा रक्सीको प्रभावबीच समानतामा अचम्मलाग्दो थियो। दुवै बलियो उत्तेजनाहरू छन्, कहिलेकाँही समय भन्दा बढी प्रयोग गर्दा, मस्तिष्क र यसको कार्यहरू पुनर्गठन गर्न सक्दछ, विशेष गरी युवा मान्छे को अशुद्ध बिरुद्धमा। वास्तवमा अनुसन्धानले देखाएको छ कि युवा बाध्यकारी अश्लील प्रयोगकर्ताहरु को दिमाग को समकक्ष संदिग्ध देखिए पछि कोकीन को लत र शराब को दिमाग को रूप मा संकेत को जवाब मा हल्का।
त्यस घटनाको परिणामस्वरूप र पछिका छलफलहरू, ब्रूस रित्सनले हामीलाई एडिनबर्गको 190 को उपासनात्मक मेडोको-चिरर्जिकल सोसाइटीको उद्घाटन पद व्याख्या गर्न दयालु निम्तो दिए।th यस वर्ष अक्टोबरमा सत्र।
चिकित्सकहरू स्वास्थ्य हेरविचारको तीव्र अन्तमा छन् त्यसैले तिनीहरू सधैँ मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको कुनै पनि उभरिरहेको क्षेत्रमा रुचि राख्छन्। हामी अनुसन्धानमा नयाँ घटनाहरू उपलब्ध गराउन सक्षम थिए, जसमा कागजातहरूले देखाउँछ कि अश्लीलको पनि 'मध्यम' प्रयोग (तीन घण्टा प्रति हप्ता) मस्तिष्कका प्रमुख क्षेत्रहरूमा ग्रेले कुरा हटाउन सक्छ। अपरिपक्व जवानहरू विशेष गरी कमजोर हुन्छन्।
अमेरिकन-आधारित संगठन SASH को बोर्ड सदस्यको रुपमा, हाम्रो सीईओ मरी शार्प वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन आवश्यक छ। यो कुनै बोझ छैन। यो संयुक्त राज्य र अन्य भन्दा धेरै चिकित्सकहरु, शैक्षणिक र स्वास्थ्य सेवाका प्रोफेसरहरु संग क्षेत्र मा नवीनतम घटनाहरु लाई भेट्न र छलफल गर्न खुशी छ। यो वर्ष हामी साल्ट लेक सिटी, युटामा थिए।
बालबालिका दुर्व्यवहार इमेजरीहरूको पीडितलाई क्षतिपूर्तिको बारेमा व्याख्या गर्ने प्रोफेसर वारेन बिनफोर्ड जस्तै उत्कृष्ट स्पिकरहरूको अलावा (हेर्नुहोस् TEDx कुरा), हामी यौन अपराधीहरु संग व्यवहार गर्न को लागी आफ्नो अनुभव को बारे मा साश, मेरी डेitch, एक कानूनी रूप देखि प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक राष्ट्रपति को साक्षात्कार गरे। हामीले एक स्थानीय जवान व्यक्ति, हंटर हर्रिङ्टनटन ((17 वर्ष पुरानो) लाई साक्षात्कार पनि गर्यौं जो आफैलाई पुन: प्राप्ति पोषण लत हो। उनले यो अरूलाई सहयोग गर्न को लागी आफ्नो मिशन बनाएको छ र अन्य जवान मानिसहरूलाई झगडा गर्नबाट रोक्न सम्भव छ। सम्पादित साक्षात्कारहरू हाम्रो वेबसाइटमा पाठ्यक्रममा उपलब्ध हुनेछ।
युवा थिएटर समूह, आश्चर्य मूर्ख पोर्न मा पोषण गर्दछ Coolidge Effect
इफेक्ट फ्रिक्स, स्कुलल्याण्ड फाउन्डेशनको स्कटल्याण्डका रयल कन्सारर्टोरेयरको कूल्रिज इफेक्टको उत्पादनमा इनाम इफेक्टको साथमा इभर्ड फाउन्डेशन गर्व सह-प्रायोजक थियो। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो अघिल्लो कथाको लागि।
नाटकीय प्रदर्शनको प्रत्यक्ष जीवन शिक्षाको लागि एकदम राम्रो माध्यम हो जुन विशेषगरि युवाहरूको लागि र उनीहरूको हृदय नजिकको चिन्ता।